China Bougainvillea Spectabilis Flower Tree yangaphandle Isityalo mveliso kunye nabenzi | Intyatyambo enelanga
I-Bougainvillea Spectabilis yeentyatyambo zomthi zangaphandle
I-Bougainvillea sisihlahla esincinci esihlala siluhlaza esineentyatyambo ezibomvu neziqaqambileyo. Uhlobo lwentyatyambo lukhulu. Zonke iibracts ezi-3 ziqokelela intyatyambo encinci engunxantathu, ikwabizwa ngokuba yentyatyambo engunxantathu. Zikulungele ukutyala kwegadi okanye ukubonwa kwebumbi. Ingasetyenziselwa bonsai, hedgerow kunye nokucheba. IBougainvillea inexabiso eliphezulu lokuhombisa kwaye isetyenziswa njengokunyuka kweentyatyambo ezinyukayo kwiindonga emazantsi e-China.
Ubungakanani obukhoyo: 30-200cm
Packaging: kwimeko yeplanga okanye uhamba ze
Iindlela zothutho: Elwandle
Ixesha Lead: iintsuku 7-15
Obona bushushu bukhulu bokukhula kwe-bougainvillea yi-15-20 degrees celcius, kodwa iyakwazi ukumelana namaqondo obushushu aphezulu angama-35 degrees celsius ehlotyeni kwaye igcine imeko engekho ngaphantsi kwe-5 degrees celsius ebusika. Ukuba iqondo lobushushu lingaphantsi kwe-5 degrees celsius ixesha elide, iya kuba semngciphekweni wokugodola nokuwa kwamagqabi. Iyayithanda imozulu eshushu kwaye efumileyo kwaye ayinganyangeki kubanda. Iyakwazi ukusinda ebusika ngokukhuselekileyo kubushushu obungaphezulu kwe-3 ° C, ize idubule kubushushu obungaphezulu kwe-15 ° C.
IBougainvillea ifana nokukhanya kwaye ziintyatyambo ezintle. Ukukhanya okungonelanga ngexesha lokukhula kuya kukhokelela ekukhuleni okubuthathaka kwezityalo, ezichaphazela ukukhulelwa kunye neentyatyambo. Ke ngoko, izithole ezincinci ezingafakwanga imbiza unyaka wonke kufuneka zibekwe emthunzini wokuqala. Kufanele ibekwe phambi kwefestile ejonge emazantsi ebusika, kwaye ixesha lelanga akufuneki libe ngaphantsi kweeyure ezisi-8, kungenjalo amagqabi amaninzi athanda ukuvela. Kwiintyatyambo zeentsuku ezimfutshane, ixesha lokukhanya kwemihla ngemihla lilawulwa malunga neeyure ezili-9, kwaye zinokuhluma zidubule emva kwenyanga enesiqingatha.
I-Bougainvillea ikhetha umhlaba ovulekileyo kwaye ochumileyo, phepha ukungena kwamanzi. Xa ufaka ibhotile, ungasebenzisa inxenye nganye yegqabi lamagqabi, umhlaba we-peat, umhlaba oyisanti, kunye nomhlaba wegadi, kwaye ungeze inani elincinci lentsalela yekhekhe ebolileyo njengesichumisi esisisiseko, kwaye uyixube ukwenza umhlaba wokulima. Izityalo eziqhakaza iintyatyambo kufuneka ziphindaphindwe zitshintshwe ngomhlaba kube kanye ngonyaka, kwaye ixesha kufuneka libephambi kokuhluma ekuqaleni kwentwasahlobo. Xa uphindaphinda, sebenzisa isikere ukunqumla amasebe axineneyo kunye nesescent.
Amanzi kufuneka enkcenkceshelwe kanye ngemini entwasahlobo nasekwindla, kwaye kanye ngemini kusasa nangokuhlwa ehlotyeni. Ebusika, iqondo lobushushu liphantsi kwaye izityalo zikwimo yokulala. Ukunkcenkceshela kufuneka kulawulwe ukugcina umhlaba wembiza kwindawo efumileyo.
Egqithileyo Isityalo seBougainvillea Bonsai
Okulandelayo: Isiqu esisodwa Pachira Macrocarpa Amahlamvu amaBonsai Izityalo
Imilo yebhola yeBougainvillea
IBougainvillea Umthi weentyatyambo